Imaaraadka”Ma faragelin Madaxbanaanida iyo Midnimada Soomaaliya”. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Apr 18, 2018
Hornafrik-Wasiiru Dowladaha Arimaha Dibadda ee Dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qar-qaash oo wareysi siiyay Idaacadda BBC laanta afka Soomaaliga ayaa ka hadlay Khilaafka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta waxa uuna dhaliilay Dowladda Soomaaliya.
Wasiirka ayaa sheegay in Imaaraadka Soomaaliya u aqoonsan yahay dal madaxbanaan oo mid ah shakina ku jirin jiritaanka iyo Midnimadooda balse waxa uu dhaliilay siyaasadda Imaaraadka lagula dhaqmay.
“Soomaaliya waa dal madaxbanaan oo mid, heshiiska Ber Bera waxaan la galnay Dowladii tan ka horeysay ee Lama gelin Soomaaliland, Soomaaliland kuma lihin Qunsuliyad, ama Safaarad wakiilana nooma joogaan Howlaha mashaariicda aan ka wadno waxay qayb ka tahay hormarinta Soomaaliya” ayuu yiri Wasiiru Dowlaha Arimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta .
Madaxweyne Farmaajo iyo dhiggiisa dalka Masar oo khadka Telleefoonka ku wada hadlay.
Xukumada Soomaaliya oo sheegtay in daba gal ay ku sameyneysa tayada Jaamacadaha dalka